Mahaiza Mampiditra Andinin-teny | Mamaky Teny & Mampianatra
Mahaiza Mampiditra Andinin-teny
AHOANA IZANY? Miresaha hevitra kely mifandray amin’ilay andinin-teny alohan’ny hamakiana azy.
Resaho hoe nahoana ianao no hamaky an’ilay izy. Alohan’ny hamakiana andinin-teny, dia miresaha hevitra mifandray amin’ilay izy mba hanampiana ny olona hahita ny hevi-dehibe ao.
Jereo koa hoe inona ny andininy eo aloha sy eo aoriana, iza no nanoratra an’ilay boky, ary iza no miteny ao. Ho marina tsara mantsy amin’izay ny zavatra lazainao momba an’ilay izy.
Lazao hoe avy ao amin’ny Baiboly izay horesahinao. Mino an’Andriamanitra ve ilay olona iresahanao? Asongadino hoe avy ao amin’ny Teniny izay lazainao, dia ho hitan’ilay olona hoe ny hevitr’Andriamanitra no ampianarinao.
Ataovy izay hahatonga azy ho liana amin’ilay andininy. Mametraha fanontaniana, dia lazao hoe mamaly an’ilay izy ilay andininy. Na miresaha olana iray, dia teneno hoe ao amin’ilay andininy ny vahaolana. Na koa milazà toro lalana iray, dia mamakia tantara ao amin’ny Baiboly ahitana an’ilay izy.
Raha zavatra efa hain’ny olona no horesahinao, dia diniho aloha hoe inona no efa fantany momba izany. Raha andininy efa hainy, ohatra, no hovakinao, dia miresaha aloha zavatra mahaliana momba an’ilay izy. Resaho izay zava-baovao azo ianarana ao, na ampirisiho izy handinika indray an’ilay izy.
Inona no azonao atao mba ho vonona hihaino ny andinin-teny hovakinao ny olona sady tena handray soa avy amin’ilay izy?
Miezaha Hahay Hamaky Teny sy Hampianatra: Mahaiza Mampiditra Andinin-teny